मान्छेलाई छुवाछुतको ब्यबहार गर्नु अपराध अनि पाप हो | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
मान्छेलाई छुवाछुतको ब्यबहार गर्नु अपराध अनि पाप हो
नेपाल एउटा यस्तो देश हो जुन शान्त मुलुकको रुपमा चिनिन्छ । नेपाल एक बहु सांस्कृतिक, बहु जातीय, बहु भाषिक र बहु जातीय देश हो । यो आदिवासी जनजाति भएको देश हो । नेपाललाई सांस्कृतिक हिसाबले धनी देश मानीन्छ । यो विभिन्न जातीय समूह, धर्म, संस्कृति इत्यादि भरीएको देश हो । यसमा विभिन्न भाषा र संस्कृति समावेश छ जसले समृद्ध र अद्वितीय संस्कृति सिर्जना गर्दैछ । नेपालको राष्ट्रिय पहिचान सांस्कृतिक र जातीय विविधतामा निर्भर रहेको छ । नेपालको विविधतामा एकतालाई महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा लिइयो जुन कायम राख्नुपर्ने र त्यसलाई सुदृढ पार्नु पर्ने हुन्छ। स्वर्गीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेपछि राज्यले विविधतामा एकताको अवधारणालाई स्वीकार गर्यो। नेपालीमा एउटा भनाइ छ “नेपाल ४ जात ३६ बणर््ा को साझा फुलबारी हो” जसको अर्थ हो (नेपाल ४ जात र ३६ उपजातिहरुको घर हो)।
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनु भएको थियो “मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जात ले हुदैन” अर्थ मान्छे लाई छुवाछुत को ब्यबहार गर्नु अपराध अनि पाप हो !! अन्ध विश्वासलाई मन बाट निकालौं ,छुवाछुत प्रथा लाई उन्मुलन गरौ !! शभ्य नेपाली नागरिक को परिचय दिउ हो ।
तर अहिले यो २१ औं शताब्दीमा पनि केहि मानिस र समाजहरुले जात, धर्म र संस्कृति को कुरामा भेदभाव गरी रहेका छन् । जात भनेको दुई किसीमाका हुन्छ एक केटी जात र अर्को केटा जात हुन्छ तर हाम्रो समाजले यो कुरा बुझदैन । मानिस सबै एउटै हुन सबैको रगत रातो हुन्छ फरक एताी मात्र छ कि कोहि काला र गोरा कोहि होचो र अगलो । हाम्रो यो सङ्कीर्ण सोच राख्ने समाजले गरदा प्रेम विवाहमा जात नमिलेको कारण रुकुमका नवराज बि.क ले आफनो जीवन गुाउन पर्याे । दलित समुदायका १९ वर्षीय युवकले चौराजहारी नगरपालिका ८ निवासी सुषमा मल्ललाई भेटे। उनीहरू प्रेम बन्धनमा परे । तर यी जोडीको लागि सजिलो थिएन । केटा बी.क परिवारका हुनाले “छुवाछुत र तल्लो जात“ को रुपमा मानिने त्यस जोडीलाई गाउँमा एक अर्को भेट्न सजिलो थिएन ।यद्यपि, सम्बन्धमा एक वर्ष भित्र, जोडी विवाहको गाँठो बाँध्ने निर्णय गरे । तर यो सजिलो थिएन। छलफल गरिएको रूपमा, केटा पछिल्लो महिना ृअप्रिल मा उसका आमा बुबालाई विश्वस्त पार्न सुषमाको घर गए । तर, जातिमा आधारित विभेद अझै पनि समाजमा गहिरो जरा गाडेको छ, तिनीहरू सुषमाका अभिभावक आफ्नी छोरीको बन्धन बी.क. मा बाँध्न सहमत भएनन्। उनीहरू ृदम्पतीले मतलब गरेनन् । उनीहरू बिहे गर्न चाहन्थे । गत शनिबार, बिहान १० बजे, विक आफ्ना आफन्तहरु संग सुष्माको घरमा उनलाई लिन गएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस नेकपाभित्रको द्वन्द्व जनतालाई हर्ष न विस्मात्
तर, सुषमाको परिवारलाई घटनाको बारेमा थाहा थियो । तिनीहरूले छिमेकीहरूलाई सहयोगको लागि बोलाए। छिमेकीहरूको एउटा समूह आइपुग्यो । चौरजहारी नगरपालिका का अध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लको नेतृत्वमा उनीहरू साथै छिमेकीहरूले विक र उनका साथीहरूलाई ढुङ्गा हान्न थाले। उनीहरूले नवराज को पीछा गरे र उनकाद साथीहरू भेरी नदीमा हाम फाले जाजरकोट र रुकुम जिल्लाको सिमानामा बगेर गए । उनीहरूको नवराज र सुषमा विवाह गर्ने योजना एक प्रकोपमा अन्त्य भयो । नवराज दलित समुदायबाट आएका हुनाले, छिमेकीहरू र स्थानीय प्रतिनिधि पनि सम्बन्ध बिरूद्ध थिए। उनीहरू छिमेकीहरूले नवराजलाई मृत्युसम्म पु¥याय ।
उक्त घटनामा अर्का दलित केटा टीकाराम विकले पनि आफ्नो ज्यान गुमाए । चार व्यक्ति अझै हराइरहेका छन् । नवराज र सुषमा मल्ल दुवैले आफ्नो बाँकी जीवन सँगै बिताउन चाहेका थिए। जाति सीमानाले जोडीलाई खुशी हुन खोज्ने, एक अर्कालाई स्वीकार गर्न रोक्न सकेन। नवराज, उनको परिवार वा सुषमाले यो कथा शोकजनक त्रासदीमा समाप्त हुन्छ भनेर सोचेका थिएनन। शनिवार राती नवबराज र उनका साथीहरूको निर्मम हत्या गरियो। “उच्च जातको“ केटीलाई माया गर्न केटालाई मात्र उसको अपराधको लागि मारिनु पर्छ भन्ने कुराले जातीय भेदभाव हटाउनको लागि हाम्रो संघर्षको लामो छायाँ उब्जायो । जबकि हाम्रो देशको कानूनले यस्तो भेदभावलाई निषेध गर्दछ, तर कुरा अघि बढ्न सकेको छैन। यो प्राय जस्तो देखिन्छ कि हामी केहि चरणहरू अगाडि बढाउछौं र त्यसपछि युगहरूमा फर्किन्छौं। यो मार्च कहिले अन्धकारमा जान्छ? हाम्रा अधिकारीहरूले यस किसिमको अपराधहरू आफूले पाउनुपर्ने
गम्भीरताका साथ कहिले लिन पाउछौ? प्रेम गरन् के पाप हो र माया मा के जात हुनु पर्छ सङ्कीर्ण सोच राख्ने जात, धर्म र संस्कृति को कुरामा भेदभाव गरको देखदा धिक्कार छ यो समजालाई । बिरामी परदा रगत को खाचो हुदा जात धर्म नचाहीने यो कस्तो । जीवन भनेको जन्म र मृत्यृ हो सबैलाई एक दिन संसार छोडी जानै पर्छ त्यसैले ठूलो जात, धनी छु, ठूलो धर्म भनी घमण्ड नगरौ । जातका प्रकार दुई वटा मात्र हुन्छ केटी जात र केटा जात र संसार चलने भनेको केटा जात र केटी जात बाट हो कुनै धर्म र जातले होइन् । नबराजको हत्यामा संलग्नलाई सजाय दिनै पर्छ ताकि यो हाम्रो देशले सबैभन्दा बढी जोखिममा पार्ने व्यवहारको मोड बनेको छ । जातीय भेदभाव नै हो सबै भन्दा ठूलो पाप । मानवत नै हो ठूलो धर्म त्यसैले जात, धर्म र संस्कृति भेदभाव नगरौ । हामी सबै बराबर छौं । राम्रो सोच बनाऊ र देश को विकाश गरौ । जात र धर्म को भेदभावमा नलागौ ।
यो पनि पढ्नुहोस डा. केसी: भ्रम र वास्तविकता
१७,जेष्ठ.२०७७,शनिबार १९:१६ मा प्रकाशित
← कोरोना संक्रमणबाट दैलेखमा एक जनाको मृत्यु, नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ७
पाकिस्तान सरकारका एक मन्त्री शहरयार खान अफ्रिदीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि →